Ukuphupha nge-Oedipus ▷ ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Inani le-Oedipus libuyele kwiintsomi zamaGrike kwaye yinto ebalulekileyo kuncwadi, kubugcisa bobugcisa nakwingqondo. I-Orphic oracle iprofetha kuLaius, ukumkani waseThebes, ukuba ukuba unyana wakhe uzale enye, uya kumbulala aze atshate nonina.
Ngaphandle kwawo onke amanyathelo okhuseleko, isiprofeto siyazaliseka kwaye u-Oedipus, unyana, unetyala ngokungazi ngeparricide kunye ne-incest. Ku-Sigmund Freud's psychoanalysis, u-Oedipus ubonakalisa umnqweno wesondo wonyana ngunina. Utata ulutshaba oluma endleleni yonyana.
Ukuba umntu uphupha ngomfanekiso we-Oedipus, banokujongana nesi sihloko ebomini bokwenyani. Umdlalo weqonga apho umlinganiswa ophambili ekhupha amehlo omabini ngenxa yeentloni uqinisekile ukushiya umbono ongapheliyo. Okubonwayo emva koko kuyasetyenzwa ephupheni. Ukutolikwa kwamaphupha kubaluleke ngakumbi kwindlela iphupha elifumana ngayo ubudlelwane phakathi komama nomntwana.
1 Uphawu lwephupha «Oedipus» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «Oedipus» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Oedipus» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Oedipus» - ukutolikwa ngokubanzi
Ephupheni kunye nesimboli yephupha "i-Oedipus", ubudlelwane obunomdla kunye nomama womntu usembindini wesenzo. Nangona kunjalo, oko akuthethi ukuba unomdla wokwenene wephupha. Ekuchazeni amaphupha kunokuba njalo Isenzo sesondo, UOedipus ayenza kunye nonina, ikwabonisa isidingo sokusondela kunye nokhuseleko kumntu oqhelekileyo. Isimboli yamaphupha ikwanokubonisa ukungqinelana Unión kubomi bokwenyani. Nangona kunjalo, ukuphupha kufuneka kubuze ngokunzulu ukuba ngaba le nto inokuchaphazela inkululeko yakho. Ekuchazeni iphupha, uphawu lwephupha "Oedipus" inokuba sisicelo sokuzimela okukhulu.
Isimboli yamaphupha "Oedipus" inokubhekisa kwi- iipropati Chaza ukuba yeyiphi eyabelwe uhlobo olo. Umama ubonakalisa ukuthamba kunye nokukhathalela ukutolika amaphupha, ukuze iphupha, ngeli xesha, libe lide ngokubanzi. Utata, kwelinye icala, unento yokwenza nobunkokeli kunye nokukhuselwa komzimba. Ephupheni, ukuphupha isimboli yamaphupha "Oedipus" imibuzo le mpawu zobudoda. Ukuphuhlisa ngokupheleleyo iphupha, kubalulekile ukuba uqwalasele neempawu zabazali.
Uphawu lwephupha «Oedipus» - ukutolikwa kwengqondo
Kutoliko lwengqondo ngokwasemaphupheni, kunophawu lwephupha «Oedipus» indima katata njenge Inkanuko ubabalo lukamama othandekayo lubalulekile njengobudlelwane benkanuko yonyana kunye nomama. Ngokubanzi, inani lotata lithathwa njengegunya lendalo kuphando lwamaphupha, luphawu lobungqongqo kunye nentando yokuqonda. Kwi-subconscious, ukuphupha kuxhomekeke kwi Indawo kayise. Nangona kunjalo, njengo-Oedipus, akenzi njalo ngokuzazi. Isimboli yamaphupha ibonisa ekuchazeni iphupha ungquzulwano ngezizukulwana, olusonjululwa ephupheni ngoloyiso lonyana ngoyise.
Kwakhona, uphawu lwephupha "i-Oedipus" ekutolikeni amaphupha kunokubonisa ukwenzakala okwenyani. Ukuba iphupha laxhatshazwa ngokwesondo, ukonzakala ngokwasemphefumlweni kuhlala kusenziwa ephupheni. Rhoqo, nangona kunjalo, "i-Oedipus" ibonakaliswa kwisimboli yephupha. ubunzima beemvakalelooko kuphupha kunabanye abantu. Kubalulekile ukutolikwa kwamaphupha ukuba ukuphupha uziva ngathi isenzo sombulo siyathandeka okanye siyanyanyeka. Ukuba uyakonwabela ukusondelelana nomama wakho emaphupheni, ukwakufuna oku ukusondela kubomi bokwenyani. Ukuba uziva ungenamandla kwaye ucinezelekile, iphupha linokuba neengxaki ngeemvakalelo eziziswa ngomnye umntu kuwe.
Uphawu lwephupha «Oedipus» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya, isini kukubonakalisa okuthandekayo kothando kunye nokunxibelelana ngokomoya. Uphawu lwephupha "Oedipus" luphawu lomnqweno woku Ubulungu kwiqela labo basondelelene ngokwengqondo nangokomoya.